Ahoana ny fomba hiatrehana ny trangam-pivoarana peristaltika mikoriana fivoahan'ny rano
Rehefa mampiasa ny paompy peristaltika mikoriana isika hamindrana ilay ranoka dia ho hitantsika fa tsy mijanona avy hatrany ny rano ao anaty fantsona, matetika mitete miadana izy. Tsy hoe mijanona mihodina ny paompy ary mijanona tsy mikoriana ny erika ao anaty eritreritsika, fa mijanona kosa ny ranoka rehefa ...
Maninona isika no misafidy paompy misy fantsona avo lenta amin'ny tsiranoka
Ny pump pump syringe laboratoara fluide dia be mpampiasa amin'ny microfluidics, electrospinning avo lenta, simika tsara, solika, biofarmaseur, tontolo iainana ary andrim-pikarohana siantifika sy sehatra hafa. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fampiharana ny simia mikoriana, ny toe-pahasalaman'ny sy ...
Paompy Peristaltika avo lenta WSP3000
avy amin'ny admin tamin'ny 21-05-01
Lead Fluid WSP3000 microliter peristaltic pump dia ampiasaina amin'ny famenoana vahaolana avo lenta maro samihafa. Ny fampiharana mahazatra dia misy: • Immunodiagnosis • Diagnostia biokimika • Vaksinim-pahafantarana • Famaritana mikraoba • Marika fivontosana
Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiasa
Ry tompokolahy malala: hiala amin'ny 1 ka hatramin'ny faha-5 Mey izahay mba hankalazana ny Andron'ny Asa. Mandritra io vanim-potoana io dia hamaly amin'ny alàlan'ny mailaka ara-potoana isika raha misy ny fanontaniana. Ny baiko mandritra ny fialantsasatra dia ny fanodinana telefaona aorian'ny fiverenantsika amin'ny 6 Mey, azafady marihina tsara.
IE expo China 2021 Lead fluide miandry anao
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-04-17
Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd. dia hampiseho ny fampirantiana IE 2021. Haneho ny vokatra ODM izahay ao anatin'izany ny TY15, andiany KT15, KJ15, andiany DW, sns., Izay natao manokana ho an'ny fampitana tsiranoka kely sy fampitana tsiranoka marobe. , miaraka amin'ny bika aman'endrika tsara tarehy, habe kely, milamina ary marina ...
CACLP-See Lead Fluid WSP3000 Peristaltic Pump ao amin'ny CACLP
Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd. dia hampiseho ny CACLP faha-18. izahay dia hampiseho paompy peristaltika WSP3000 microliter paompy peristaltika BT103S, paompy peristaltika BT600F ary paompy peristaltika mikoriana, MM10, KD15 ary paompy peristaltika OEM sy ODM hafa. CACLP-ny fampirantiana sainam-pirenena ...
Paompy Peristaltika mamoaka ranoka
Paompy Peristaltika mamoaka ranoka mitondra paompy peristaltika mamoaka tsiranoka ho an'ny famokarana fanafody, mpamokatra paompy peristaltika china pompa Peristaltika mitarika fluide no paompy peristaltika any Shina. Izy io dia mirotsaka amin'ny fikarohana indrindra ary ...